Aya mitsara akanakisa ekuti ufare - Kubatsira Zviwanikwa | Kuzvibatsira Zviwanikwa
Zvinonakidza sei zvese zvinovanzwa nemutsara zvinogona kumutsa mauri, manzwiro, kuseka, tariro, kunyepedzera, iwo manzwiro haagumi. Nechirevo iwe unogona kutsanangura manzwiro nenzira yakapusa, ingave yakanaka kana kwete, asi hapana mubvunzo kuti, kana ukasarudza mazwi akakodzera, mashoma chete akakwana kutaura zvese zvaunoda. Sezvo chirevo chichienda, uye nechikonzero chakanaka, "kunzwisisa kwakanaka, mashoma mazwi akakwana."
Uye ndezvekuti, dzimwe nguva, hazvidiwe kuunganidza mazwi asingaperi akakomberedza nzira iri nyore kusvika. Dzimwe nguva zviri nyore sekugadzira chirevo nemazwi akakodzera, avo vanozvitaura zvese nenzira yakajeka, ipfupi uye ipfupi. Iwo mitsara inonamira mumoyo nepfungwa, uye izvo, neimwe nzira kana imwe, zvinokubatsira kufungisisa pamativi akasiyana ehupenyu.
Kune akawanda mativi ehupenyu anogona kuomarara chero nguva, basa, hukama kana rudo hukama, tariro yeramangwana riri nani kana mamiriro ehupenyu. Uye kunyangwe, vanhu vazhinji vanobvunza chikonzero chekugara kwavo munyika ino. Yese mhando dzemibvunzo ndeye yakagovaniswa nevamwe vanhu vazhinji munyika Uye nekuda kweizvo vazhinji vevanhu ava vanotaura zvavanonzwa nezviitiko kuburikidza nemazwi, tinogona kushandisa huchenjeri hwavo kuwana pfupi uye pfupi mhinduro.
Mashoko anogona kukumutsa kubva kuhope, nekuti mashoma mazwi akakwana kuti unzwe iko kubaya kuti vanhu vazhinji vanoda panguva dzakasiyana muhupenyu hwavo. Hukama hwehukama hunowanzo kuunza nyaya zhinji, nekuti vese kana vazhinji vangangoda kupinda mupfungwa dzewavakaroorana naye uye nekuziva manzwiro avanoita, kana kana vachigovana fungidziro dzavo muhukama hwavo.
Mitsara yerudo, ayo anobvunza hukama kana ayo anokubatsira kuti unzwisise mumwe wakoIvo vanogona kukubatsira iwe kuvandudza hukama huri kunetseka. Nekuti mutsauko uripo pahunhu kazhinji ndiwo unokonzeresa kuparara kwevakaroorana. Hazvisi nyore kuti unzwisise munhu waunogovana naye hupenyu hwako, asi hazvidiwe kuti uzive mashandiro anoita pfungwa dzavo, kana uchikwanisa kunzwisisa hunhu hwavo chaihwo.
Mune zvimwe zviitiko, vanhu vanoda kurudziro mitsara yakanyorwa nevanhu vakabudirira, matipi akapfupikiswa mumutsara wakapusa. Nekuti kuburikidza neaya mazwi, tinogona kuona kuti kiyi yekubudirira iri matiri, ndirwo rudzi rwekudzidza rwunogona kuwanikwa mumitsara iyi kazhinji pasina munyori anotenderera kuburikidza neiyo huru encyclopedia inonzi Internet.
Muchikamu chino chinonzi Mitsara, unogona kuwana nhamba yakakura yemitsara yakarongeka uye yakanyorwa nezvinyorwa. Mhando dzese dzemitsara iwe dzaunogona kushandisa kunyora kuzvarwa kwekuzvarwa kune akakosha munhu, asiwo kuzvikurudzira iwe kana iwe uchichida icho. Zvekuti iwe haufanire kutsvaga kwenguva refu uye kunonetesa, muZvibatsiro -Zvezviwanikwa isu tinoita kuti zvive nyore kwauri.
Nekuti sarudzo dzakakura kwazvo zvekuti, kana izvo zvaunoda chiri chinhu chinokurumidza, chiri nyore uye chinonakidza, kutsvaga iwo mazwi iwe pachako kunogona kutungamira mukusiiwa nekukurumidza. Neichi chikonzero, kuburikidza nezvinyorwa zvakasiyana izvo iwe zvaunowana mune ino Chikamu cheMitsara, iwe unokwanisa kuwana zviri nyore izvo zvese zvisingazivikanwe zvemukati kune vanhu vazhinji.
Mimwe yemitsara iyo yatinogovana newe muchikamu chinoIvo vanobva kuvanyori vakakura vemabhuku. Saka, pamusoro pekutsvaga kurudziro kana kurudziro, unogona kuwana vanyori vakakura. Nekuti kana chirevo chakareruka chichigona kuita kuti uchinje nzira yekufunga, fungidzira zvaunogona kudzidza mubhuku rese. Usapotsa ichi chiitiko, nekuti kana iwe uchinge wawana iyo isingaperi nyika yemitsara, iwe unozokomberedzwa
Aya makumi matatu akanakisa mitsara yeLa Casa de Papel
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita 15 maawa .
Kunyangwe iine mwaka mitatu, ingori nhevedzano inokukochekera kubva pakutanga. Icho chimwe cheakanakisa akateedzana ...
Mitsara makumi mashanu nemashanu inozivikanwa yaSocrates kuti anzwisise huzivi hwake
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita 1 vhiki .
Unoziva here kuti Socrates ndiani? Iye anozivikanwa sababa vefilosofi yeWestern. Kunyangwe iye asina hanya kuti iye ...
Aya makumi matatu akanakisa mitsara yaJorge Bucay nezve hupenyu
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita Mavhiki e2 .
Jorge Bucay anogara achitiita kuti tifungisise namashoko ake, uye hazvishamise, iye mukurumbira weGestalt murapi uye ...
Aya makumi maviri akanakisa mitsara yeHaruki Murakami
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita Mavhiki e3 .
Haruki Murakami akaberekwa muna 1949. Ndiye munyori ane mukurumbira uye ane mukurumbira wechiJapan munharaunda. Rimwe remabasa ...
Iwo makumi mana akanakisa mitsara yeJoker
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita Mavhiki e4 .
Kana iwe uchida chiito mabhaisikopo, iwe unogona kunge uchiziva iwo Batman mafirimu, uyezve, iye ...
25 mitsara yekuverenga panguva yepamuviri
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita 1 mwedzi .
Kubata nhumbu inzvimbo yakanaka kwazvo muhupenyu hwemukadzi. Inguva iyo iyo ...
Makumi matatu neshanu ekukurudzira nezve yoga
Kune vanhu vazhinji, ivo havape iyo yoga kukosha kwakakodzera. Muchokwadi, kune vanhu vanoti kana vachizviedza ...
40 mitsara pamusoro pegodo
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita 2 mwedzi .
Kana iwe wakambonzwa shanje, iwe uchaziva kuti hazvifadzi kuinzwa. Zvinowanzoitika patinoona kuti mumwe munhu ...
Pfupi rudo rwekutsaurira
Kana iwe uri kutsvaga ipfupi rudo kutsaurirwa, saka iwe wauya kurudyi nzvimbo. Kupfupiswa kwerudo kupfupi kwakafanana nediki ...
Mitsara kune avo vanoda kufamba
Paunofamba zvishoma, kuzviita kunogona kuita kuti unzwe kusava nechokwadi uye kunyange kutya nekuti kunetsekana kuti zvese zvichabuda ...
36 mitsara yakanaka yehupenyu
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita 3 mwedzi .
Tiri kurarama munyika umo zvinhu zvese zvinoita kunge zviri nyore kana kuomarara. Hapana nzvimbo yepakati. Asi hazvisi nguva dzose ...
Iwo akanakisa mitsara yaamai nababa yekutenda kana zuva rekuzvarwa
+110 Mashoko emhuri ausingakwanise kupotsa
Mitsara yekutarisira nharaunda
Iwo makumi matanhatu nemapfumbamwe akanakisa Mitsara yeVadzidzisi kana Vadzidzisi vevamiririri vatambi
Isu tinokupa iwe akanakisa mitsara inotonhorera
+ 100 Mitsara yekuodza mwoyo uye kuora mwoyo
+125 Mitsara yekuedza kuzvikurudzira
+160 Pfupi fungidziro dzinozoita kuti iwe ufunge
+150 Mitsara mipfupi yekuratidzira nekufunga
Mitsara yekuzviremekedza kusimudza mweya
+100 Mitsara yakadzika ichaita kuti iwe ufungisise
+40 Mitsara yeMudiki Muchinda iwe yausingakwanise kupotsa
110 Paulo Coelho zvirevo zverudo, hupenyu, hushamwari uye nezvimwe
Iwo akanakisa 100 mitsara ye Instagram
TOP 101 Yakawanda Yakagovaniswa Yakanaka Pfungwa (uye vanyori vayo)